घट्यो सुनको मूल्य,तोलाको कति? |
August 16, 2021 adminLeaveaComment on घट्यो सुनको मूल्य,तोलाको कति?
नेपाली बजारमा सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट आएको छ ।आज छापावाल सुन प्रति तोलामा एक सय रुपैयाँले घटेर ९० हजार ६०० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । आइतबार छापावाल सुन प्रतितोला ९० हजार ७०० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। तेजावी सुनको मूल्य प्रतितोला ९० हजार १०० रुपैयाँ कायम भएको छ ।चाँदीको मूल्य पनि आज घटेको छ । आइतबार चाँदी प्रतितोला १ हजार २०५ रुपैयाँमा कारोबार भएकोमा सोमबार ५ रूपैयाँले घटेर १२ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको महासंघले जनाएको छ ।
थप समाचार:देशलाई एक होइन सयौं कुलमानहरू चाहिएको छ:भनिन्छ, संसारलाई उज्यालो दिनका लागि एउटै सूर्य काफी हुन्छ । यो भनाइ सूर्य, चन्द्र र केही प्रकृतिप्रदत्त वस्तुहरूमा मात्रै लागू हुन्छ । व्यक्तिको कार्य र विशेषतालाई हेर्दाचाहिँ हरेक व्यक्ति प्राकृतिक र आफैँमा प्रकृतिको अनुपम उपहार हो ।
अहिले पुनः कुलमान घिसिङको चर्चा देशैभरि छ । आखिर किन चर्चा हुन्छ उनको बारबार ? किन उनलाई डुबेका संस्थाहरू उकास्न मात्रै प्रयोग गरिन्छ ? उनले कुनै डुबेको संस्थालाई माथि उतारिदिनुपर्ने अनि त्यसलाई फेरि डुबाउनचाहिँ अर्को ‘भष्मासूर’ पात्र माफियाहरूका मिलेमतोमा ल्याउने ? के कुलमान घिसिङ माफियाहरूका ‘नोकर’ हुन् ? उनको इमानदारिता र दक्षता ‘डोरमेट’ हो जसले जतिखेर चाह्यो उतिखेर युज गर्न सक्ने ? अहिले यस्ता प्रश्नहरू देशैभरि जनसामान्यबाट उठाइएका छन् । कुलमानलाई पुरस्कारजस्तो दिँदा हितेन्द्रहरूलाई चाहिँ गल्तीका लागि सजाय दिइरइनुपर्दैन?
जिब्रो नचपाईकन भन्दा यतिखेर गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गर्ने शेरबहादुर देउवालाई मन्त्रिमण्डल विस्तार ‘भालुको कन्पट’ भएको छ । प्रचण्डले हाकाहाकी नै भने कि उनका उनन्चासै सांसदहरू मन्त्रीका आकांक्षी छन् । माधव नेपालले विश्वासको मत दिलाएकामा उनीसमेत भित्रभित्रै लोभ गरिरहेका होलान् । नेपाल पक्षीय मेटमणि चौधरी, रामकुमारी झाँक्रीलगायतका सांसदहरू मन्त्री बन्नका लागि खुट्टा उचालिरहेका छन् । अहिलेको विचारशून्य राजनीतिमा सबै सांसदहरू मन्त्रीका लागि मात्रै लालयित देखिन्छन् । सकसमा परेका देउवालाई गगन थापा, मीनेन्द्र रिजाल र डा. नारायण खड्काहरूलाई मन्त्री बनाउन पार्टीभित्रैबाट चर्को दबाब छ ।
यतिखेर कुलमान नेपाली राजनीतिमा ‘सुरथका एक्का’ भएका छन् जसलाई भँजाएर सत्तासीन पार्टीहरू आफ्ना सबै गल्ती, कमी–कमजोरी र असफलतालाई ढाकछोक गर्न चाहन्छन् । पार्टीहरूमा अब देखाउने क्यारिस्मेटिक नेता र कार्यकर्ताहरूको अनिकाल पर्दै गैरहेको हो त ? यस्तो बेलामा कुलमानले नै पूरै राजनीतिक पार्टीहरूका बेडा पार लगाइदिनुपर्छ कि कसो? कस्तो देश रहेछ एउटा विद्युत् प्राधिकरणमा यतिका वर्षमा सिङ्गै एकजना कुलमान मात्र त्यस्ता सुपात्र रहेछन्, जसले सिङ्गो प्राधिकरण बचाइदिनुपर्ने।वाह !नेपाली ब्युरोक्रेसी। वाह! नेपाली गणतन्त्रात्मक शासन पद्धति र यसका नोकरशाहहरू!
आमजनता एकै लवजमा भनिरहेका छन्, ‘अब कुलमानहरूले विद्युत् प्राधिकरणमा मात्रै टाक्सिएर हुँदैन । उनीहरूका विद्वता र दक्षताका आधारमा उनीहरूलाई ऊर्जा क्षेत्रका तमाम जिम्मेवारी दिँदा हुन्छ, न कि सीमित अधिकार र अवसर दिएर एउटा सानो क्षेत्रमा सधैँ कजाइरहने । कुलमानहरूले समेत राष्ट्रिय फोरमहरूबाट भन्न सक्नुप¥यो कि उनीहरूले परेका बेला डुबेका संस्थानहरूलाई माथि ल्याउने ल्याकत राख्छन् भने अब उनीहरूलाई पूरै देश चलाउने मौका दिइनुपर्छ । के कुलमान घिसिङलाई अघि सारेर माओवादी पार्टीले आगामी सग्लो चुनावी अभियान सञ्चालन गर्न सक्दैन र?
होली को मुखैमा आज एक्कासी अचम्मित पार्ने किसिमले ह्वात्तै घट्यो सुनको भाउ: हेर्नुहोस् कति पुग्यो!
सोच्नै नसक्ने गरी घ’ट्यो सुनको मुु’ल्य,यसरी हुदैछ कारोबार।